Nagu saabsan - Jiangsu Runau Electronics Manufacturing Co., Ltd.
Dib u habeyn ku samee si kaamil ah, U fuliso si weyn
Runau Electronics Manufacturing Co., Ltd waa soo saare hormuud u ah aaladaha semiconductor korontada ee Shiinaha. Iyadoo la aqoonsan yahay farsamooyinka caalamiga ah ee la aqoonsan yahay iyo xirfadda wax soo saar ee la soo bandhigay lana qaatay, aasaasayaasha Runau Electronics waxay ku lug lahaayeen warshadaha semiconductor-ka sare ee Shiinaha in ka badan 30 sano. Runau waxay heshay khibrad si ay u bixiso xalalka ugu casrisan ee cilmi baarista, qaabeynta, horumarinta, cabirka, iyo soosaarida aaladaha semiconductor-ka awooda sare leh, moduleyaasha awooda, iyo unugyada isku imaatinka ee awoodaha lagu dabaqi karo. Runau wuxuu awood buuxda u leeyahay inuu hubiyo inuu bixiyo farshaxanka dowladeed iyo aaladaha awooda korantada lagu kalsoonaan karo. Mar kasta oo arrimaha loo baahdo, farsamayaqaanadeena, injineeradayada, kooxda wax soo saarka iyo iibinta ayaa si dhow ula shaqeeya macaamiisheenna si loo hubiyo tayada sare, helitaanka waqtiga ku habboon, iyo waxqabadka firfircoon ee xarumaha korantadooda.
Shirkadda waxaa lagu dhisay 1000m2 aqoon isweydaarsi heer sare ah, 100s waxay dejisaa xarumaha wax soo saarka ugu horumarsan iyo qalabka cabbiraadda, xubnaha ugu tayada badan 70s shaqaalaha khibradda u leh khadka wax soo saarka, 12 injineerro xirfadlayaal ah iyo farsamo yaqaanno (4 injineerro sarsare ah) oo ku jira R&D iyo qaybaha wax soo saarka. . Dr. Henri Assalit, oo caan ku ah warshadaha semiconductor-ka awoodda Mareykanka, waxaa lagu casuumay lataliye xagga horumarinta farsamada ah. Xirfadaha geedi socodka jarista iyo heerka wax soo saarka ayaa lagu dabaqay Runau si loo dhiso faa'iidooyinka tartanka ee farsamada iyo soo saarista.
Iyada oo la adeegsanayo isbeddelka joogtada ah iyo teknoolojiyada jarista, Runau waa khabiir aqoon sare ku leh tayada qalabka wax soosaarka wax soo saarka ee Shiinaha, kaarka khadka oo ay ku jiraan:
● Qalabka 'Thyristor & rectifier diode chip', square thyristor chip
● Thyristor & dyede dyede, welder diode, GTO, saxaafadda-xirmo IGBT, modules awoodda, iyo kiniisadaha.
● Chip chip thyristor
● 6”Thyristor & rectifier iyo 8500V qalab danab sare ayaa laga heli karaa khadka wax soo saarka.
Farshaxanka badeecadaha ayaa si ballaaran loogu adeegsadaa kala-goynta korantada, rogista, kuleylka kuleylka, korantada korantada, korantada, koronto-dhaliyaha, is-beddelka soo noqnoqda, bilowga jilicsan, xakamaynta xawaaraha mootada, UPS, SVC & SVG iyo qalabka guryaha, iwm.
Runau waxaa laga dhaxlay falcelin deg deg ah, horumar joogto ah, iyo istiraatiijiyad adeeg caalami ah. Runau wuxuu sii wadi doonaa inuu bixiyo hagaajinta iyo xalinta macaamiisha ujeeda dhanka aaladda danab sarreysa & qalabka hadda jira iyo isdhexgalka nidaamka codsiga semiconductor ee awoodaha la-hawlgalayaasha caalamka.